နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သောရက်စွဲ- နိုဝင်ဘာလ 20 ရက်၊ 2020 ခုနှစ်
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပုံကို သင်နားလည်အောင် ကူညီပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက် အကျဉ်းချုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့က အသင့်ပြင်ထားပါသည်။ နောက်ထပ် အသေးစိတ်အတွက် အောက်ပါကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက် ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ကြည့်ပေးပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပုံ၊ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်တွင်ရှိသော ရွေးချယ်စရာများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို သင်က အပြည့်အဝနားလည်စေရန် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက် ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုလည်း သင်က ဖတ်ရှုပါရန် အကြံပြုပါသည်။
အဓိက အချက်များ အကျဉ်းချုပ်
သင့်ဒေတာများကို စုဆောင်း၊ အသုံးပြုခြင်းအတွက် မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိပါသလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းအတွက် OPPO တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့သော် အတိုင်းအတာအားဖြင့်ဆိုရလျှင် သင်သည် ဥရောပတွင် နေထိုင်ပါက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းချုပ်သူသည် OROPE Germany GmbH ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုသော ဒေတာများ သင်က ကျွန်ုပ်တို့အား တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးသော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်က အသုံးပြုချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းသော သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ကျွန်ုပ်တို့က လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်းအား မည်သည့်အရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုသလဲ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် စာချုပ်ပါအတိုင်း စွမ်းဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားအတွက်၊ သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်အတွက် ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့် ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန် အခြေခံအားဖြင့် တရားဝင်သောအခါမှသာ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က သုံးပါမည်။
ဆုပေး ကံစမ်းမဲများကဲ့သို့သော ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်က ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအခါတွင်လည်း သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
သင့်ဒေတာကို အချိန်မည်မျှကြာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က သိမ်းထားမလဲ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သည်ထက် ပိုကြာရှည်စွာ သိမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ ကိစ္စအများစုတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ပြောခဲ့သည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို သုံးရန် လိုအပ်သရွေ့သာ ကျွန်ုပ်တို့က ၎င်းကို သိမ်းထားပါမည်။ သို့သော်ငြားလည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ပိုကြာရှည်စွာ သိမ်းဆည်းထားရန် ဥပဒေက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သော သို့မဟုတ် သင် စိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်သော အချက်အလက်များကို သင့်ထံ ပို့နိုင်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သင့်သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က လိုအပ်လျှင် သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆက်သွယ်မှုများတွင် မပါဝင်ရန် သင်က အချိန်မရွေး ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေခြင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ပါတနာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကဲ့သို့သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ထိန်းချုပ်သော/ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အခြားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်တို့က ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောနေရာတွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းပါတနာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက ဆီလျော်သော ဒေတာကာကွယ်ရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာကြောင်းသေချာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်ပါမည်။
လုံခြုံရေး သင့်ဒေတာ လုံခြုံရေးကို ကျွန်ုပ်တို့က အလွန် အလေးအနက် လုပ်ဆောင်ပါမည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် အမျိုးမျိုးသော နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့က အကောင်အထည်ဖော်ထားပါသည်။
သင့်ရပိုင်ခွင့်များ အချို့သော ဒေတာကာကွယ်ရေး ဥပဒေများသည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါရပိုင်ခွင့်များအပါအဝင် သင့်အား ရပိုင်ခွင့်များ အပ်နှင်းထားနိုင်သည်၊ ဥပမာ-
•	သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပုံကို အကြောင်းကြားမှုရရှိရန်၊
•	သင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့အား စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များကို ဝင်ကြည့်ရန်၊
•	မှားယွင်းသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ပစ် သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးပါဟု တောင်းဆိုရန် သို့မဟုတ်
•	သင့်ရပိုင်ခွင့်များအနက်မှ တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့က ချိုးဖောက်သည်ဟု သင်က ထင်မြင်လျှင် သက်ဆိုင်သည့် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းသို့ တိုင်ကြားရန်။
သင်သည် ဥရောပတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက်တွင် အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားသည်ထက်ပို၍ သတ်မှတ်ထားသော ရပိုင်ခွင့်များ သင့်တွင်ရှိပါမည်။
ကလေးသူငယ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အနည်းဆုံး အသက် 18 နှစ်ရှိသော သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကလေးသူငယ်များ၏ ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်း၊ အသုံးပြုမိခြင်းမရှိစေရန် ကြိုးစားပါမည်။
နိုင်ငံတကာ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့လည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားနိုင်ငံများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဒေသအလိုက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က လိုက်နာမိကြောင်း သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကာ ယင်းသို့သော လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုများလုပ်ရာတွင် ဆီလျော်သည့်ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
အပ်ဒိတ်များ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ရံဖန်ရံခါ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပြီး အပ်ဒိတ်မှန်သမျှကို လုံလောက်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခု သုံး၍ သင့်ထံ အကြောင်းကြားသွားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် သင့်တွင် မေးစရာများရှိပါက https://www.oppo.com/mm/privacy-feedback/ တွင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စမတ်ဖုန်းများ သို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်ရသော စက်များ၊ အက်ပ်များ၊ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြား ထုတ်ကုန်များ ("ဝန်ဆောင်မှုများ" ဟု စုပေါင်းညွှန်းဆိုထားသည်) အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က မည်ကဲ့သို့ စုဆောင်း၊ အသုံးပြု၊ ထုတ်ဖော်၊ လွှဲပြောင်း၊ သိမ်းဆည်းပုံနှင့် တစ်နည်းအားဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံတို့ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မပေးမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးမှုများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှုပေးပြီး ယင်းအချက်များနှင့် သင်ကိုယ်တိုင် ရင်းနှီးအောင် လုပ်ပါ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာအပြင် အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မူတည်၍ သီးခြား ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာများကို အသုံးချနိုင်ပါသည်။ အခြေအနေတစ်ရပ်စီတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
သင်မည်သည့်ဒေသတွင်နေသည်ဖြစ်စေ အပိုင်း A ပါ အထွေထွေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အပိုင်း B သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ လစ်တန်စတိန်း၊ နော်ဝေး၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် ဆွစ်ဇာလန် ("ဥရောပ") တို့တွင် တည်ရှိသည့် ဖောက်သည်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာသည် အောက်ပါတို့အား သင်နားလည်စေရန် အထောက်အကူ ပေးပါလိမ့်မည်-
A. အထွေထွေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကွဲပြားပါသည်။
• ထိန်းချုပ်သူအဖြစ် OROPE Germany GmbH- သင်က ဥရောပတွင် နေထိုင်လျှင် Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Dusseldorf လိပ်စာဖြင့် ဂျာမဏီတွင် တရားဝင်ပေါင်းစည်းထားသည့် OROPE Germany GmbH ကုမ္ပဏီသည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် အလုံးစုံ တာဝန်ရှိပါသည်။
• ယေဘုယျအားဖြင့် OPPO သည် ဥရောပပြင်ပရှိ ဝန်ဆောင်မှုများက စုဆောင်းထားသည့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတွက် တာဝန်ရှိပြီး ယင်းတို့အား ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ပြင် သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လေးစားရန် စူးစိုက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဒေသတွင်းသုံးနိုင်အောင်ဖန်တီးရန် သတ်မှတ်ချက်များ သက်ရောက်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ဤသတ်မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါမည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံဆောင်ရွက်ပုံအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်လိုပါက "ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
"OPPO"၊ "ကျွန်ုပ်" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့ကို" ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းသည် သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ OROPE Germany GmbH သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။
ရောင်းပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်ပြုချက်ရ အထူးသီးသန့် ဖြန့်ချိသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ကိုင်ကြောင်းကို မှတ်ထားပေးပါ။ ဤကဲ့သို့သော ခွင့်ပြုချက်ရထားသည့် အထူးသီးသန့် ဖြန့်ချိသူများသည် သင်၏ တောင်းဆိုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့ထံ သင်က ပံ့ပိုးပေးသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းပုံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမျိုးအစားများ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဆိုသည့် ဝေါဟာရတွင် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော နားလည်မှု ပူးတွဲပါလာပြီး ခွဲခြားဖော်ပြထားသော သို့မဟုတ် ခွဲခြားသိနိုင်သော လူတစ်ဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များမှန်သမျှကို ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းက ဥပမာအားဖြင့် သင့်အမည် သို့မဟုတ် လိပ်စာကဲ့သို့ သင့်အား တိုက်ရိုက် ဖော်ပြသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသာမက ကျွန်ုပ်တို့က ရရှိနိုင်သော အခြားအချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဥပမာ- IP လိပ်စာကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့က သင်နှင့် လင့်ခ်ချိတ်နိုင်စေမည့်ဒေတာဖြစ်သည့် အခြားဒေတာများကိုလည်း ဆိုလိုသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ချန်နယ်များမှာ- 1. သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်က တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးသည်; 2. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်က အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင်က အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် ရယူပါသည် နှင့်/သို့မဟုတ်; 3. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံမှ သင်နှင့်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် သင့်ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆက်တင်များ၊ သင်သုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ သင်ပြုလုပ်သော ရွေးချယ်မှုတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။
1. သင်က တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်၊ ယင်းသို့ပေးအပ်ရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မည်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်လိုကြောင်း သင်က လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို လိုအပ်လျှင်နှင့် ယင်းဒေတာများကို သင်က ပံ့ပိုးမပေးရန် ရွေးချယ်လျှင် သင်တောင်းဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ရိုက် စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတွင် ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-
• ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်မှာယူပါက သို့မဟုတ် အခပေး ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးပါက- သင့်အမှာစာကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငွေပို့ငွေလွှဲခြင်း၊ အမှာစာ နံပါတ်၊ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်များ၊ သင်၏ ဝယ်ယူမှု/ပြန်ပို့မှု/ငွေပြန်အမ်းမှု သို့မဟုတ် အခြား တောင်းဆိုမှုနှင့် အခြား ဆက်သွယ်ရေး မှတ်တမ်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် သင်၏ ပေးပို့ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်များ၊ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်၊ ခရက်ဒစ်ကတ် အသေးစိတ်များ၊ ငွေတောင်းခံရန် လိပ်စာနှင့် အခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုမီဒီယာ အကောင့်များကို သင်ဖော်လိုလုပ်ထားချိန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုသုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ချိန်တွင်- သင့်ပရိုဖိုင် အချက်အလက်၊ ဖလှယ်ခဲ့သည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု၏ အကြောင်းအရာနှင့် အချိန်ကိုက်မှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်များ သို့မဟုတ် သင့်တောင်းဆိုမှုကို ဖြေဆိုရန် လိုအပ်သည့်အတိုင်း အခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသည့် ဒေတာများသည် လူမှုကွန်ရက်တွင် သင်သုံးထားသည့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။
• အကြောင်းအရာများကို သင်က အခြားလူများနှင့် မျှဝေသောအခါ- ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ပါဝင်အကြောင်းအရာကို သင်နှင့်အခြားသူများ ဆက်သွယ်၊ မျှဝေနိုင်စေပါသည်။ ဆက်သွယ် သို့မဟုတ် မျှဝေထားသော အကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်ကိုသုံး၍ ပေးပို့ကာ ယင်းအထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားပါမည်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ ပရိုဂရမ်အတွက် သင်စာရင်းပေးသွင်းသောအခါ- ဤပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအခါ သင့်စက် အချက်အလက်များ (စက်၏ အမျိုးအမည်ခွဲခြားချက် ဒေတာများ၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်စရာ ဒေတာ စနစ်နှင့် အက်ပ်ဒေတာ၊ ကြော်ငြာ ID၊ IP လိပ်စာ၊ ဒေသစံတော်ချိန်)၊ သင်၏ အသုံးပြုမှု ဒေတာ (ဥပမာ- ထုတ်ကုန် လုပ်ဆောင်ချက် အသုံးပြုမှု ကိန်းဂဏန်းများ၊ ထုတ်ကုန် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ကိန်းဂဏန်းများအပြင် အက်ပ် အင်စတောလုပ်ခြင်း၊ ဖြုတ်ပစ်ခြင်း၊ ချွတ်ယွင်းမှတ်တမ်းများ)၊ သင့်စက်တည်နေရာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (အဆိုပါ တည်နေရာ ခြေရာခံခြင်းကို သင်က သီးခြား ခွင့်ပြုသည့် အတိုင်းအတာအထိ) နှင့် သင်၏ မှတ်တမ်းဖိုင် အချက်အလက် (ဥပမာ- ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးခဲ့သည့်အချိန်နှင့် အသုံးပြုမှု ကာလ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည့် ရှာဖွေရေး စကားလုံးများနှင့် ပြန်စဖွင့်ခြင်းများ၊ အဆင့်မြှင့်ခြင်းများ၊ ချွတ်ယွင်းမှုများ၊ ပျက်သွားခြင်းများ ကဲ့သို့သော စက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ရပ်များအကြောင်း အချက်အလက်များ) ကို ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်နိုင်ပြီး အချို့ဒေတာများကို Wi-Fi သုံး၍သာ အပ်လုဒ်တင်နိုင်သည်။
• ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော အခြား အခြေအနေများတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန် သို့မဟုတ် ရယူရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်- ယင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင် ဆုမဲများ၊ ကူပွန်များ သို့မဟုတ် အခြား ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့/ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စား အခြား လုပ်ငန်းပါတနာများက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲချိန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့/ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းပါတနာများက လက်ခံကျင်းပသည့် အသုံးပြုသူ ဖိုရမ်များ/ဘလော့ဂ်များတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲချိန်တို့ ပါဝင်သည်။ ဤအတိုင်းအတာအထိ သင့်အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ယင်းသို့သော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖော်ပြထားသည့် အခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကို သင်စာရင်းပေးကြည့်ရှုချိန်တွင်- သင့်အမည်၊ အီးမေးလိပ်စာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု (သင်က အီးမေးလ်ဖွင့်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဖွင့်မထားသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ပါဝင်သော လင့်ခ်ကို တို့ထိလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မထိသည်ဖြစ်စေ ယင်းကဲ့သို့သော) အပေါ် သင်၏ တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ပုံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူစုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
• အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အမည်မှန် စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်- ယင်းသို့သော ကိစ္စရပ်တွင် သင်၏ အမည်အပြည့်အစုံနှင့် အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် ID အသေးစိတ်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါမည်။ ယင်းသို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် သင်က ငြင်းဆန်လျှင် သင့်အား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အလိုအလျောက် စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
သင်ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအပြင် — အထူးသဖြင့် သင့်စက်ကို သင်အသုံးပြုချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် စုဆောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သီးခြား စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-
• စက် အချက်အလက်များ- ၎င်းတွင် စက်အမည်၊ စက်မော်ဒယ်၊ ဒေသနှင့် ဘာသာစကားဆက်တင်များ၊ စက်၏အမျိုးအမည်နံပါတ် (IMEI နံပါတ်)၊ စက်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲ အချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေ၊ IP လိပ်စာ၊ MAC လိပ်စာ၊ သုံးစွဲဆောင်ရွက်သည့် စနစ်ဗားရှင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် သုံးသော စက်ဆက်တင်များ ပါဝင်နိုင်သည်။
• မှတ်တမ်း အချက်အလက်များ- ၎င်းတွင် မည့်သည့်အချိန်နှင့် မည်မျှကြာအောင် ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးသည်၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံး၍ ရိုက်ထည့်လိုက်သော ဝေါဟာရများနှင့် သင့်စက်၏ ချွတ်ယွင်းမှတ်တမ်းကဲ့သို့သော အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သင့်စမတ်ဖုန်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်နိုင်သောစက်တွင်ပါသည့် Android စနစ်အား သင်၏ အမှား သို့မဟုတ် ပိတ်သွားမှု မှတ်တမ်းဖိုင်တွင် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ချိန်၌ စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်မည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖန်တီးထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပိတ်သွားမှုအတွက် အကြောင်းရင်းကို စိစစ်နိုင်စေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ယင်းသို့သော အချက်အလက်များတွင် ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ Google အကောင့်၊ Facebook အကောင့် စသဖြင့် ကဲ့သို့သော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအချက်အလက်များကို ချွတ်ယွင်းမှတ်တမ်း ဆန်းစစ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုပြီး မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးမပြုကြောင်း သေချာစေရန် လုံခြုံရေး အစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်အထည် ဖော်ထားပါသည်။
• တည်နေရာ အချက်အလက်များ- ၎င်းတွင် စက်၏ GPS အချက်ပြမှု သို့မဟုတ် သင့်အနီးတဝိုက်ရှိ Wi-Fi လွှင့်စက်များနှင့် အခြေစိုက်စခန်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ စက် တည်နေရာ ID နှင့် တည်နေရာ အခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို သင်ဝင်ရောက်သုံးစွဲချိန်တွင် ကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ID (ဥပမာ- မိုးလေဝသ အက်ပ်ကို သင်အသုံးပြုချိန်) တို့ ပါဝင်သည်။ တည်နေရာအခြေပြု အက်ပ်မျိုးစုံမှ တစ်ခုစီအတွက် တည်နေရာ အခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်က ဖွင့်လိုသလားဟု ကျွန်ုပ်တို့က မေးပါမည်။ စက်ဆက်တင်များတွင် သင့်စက်၏ တည်နေရာ ဆက်တင်များကို သင်က ပိတ်နိုင်ပါသည်။ တည်နေရာ အချက်အလက်များကို သင် ပိတ်လိုက်ပါက သင့်ထံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် တည်နေရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့် အက်ပ်များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများမှာ ချွတ်ယွင်းနိုင်ပါသည်။
• ကင်မရာ- ကင်မရာအက်ပ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ချက် ဒေတာ (ဥပမာ- အက်ပ်ကို သင်အသုံးပြုသည့် ကြိမ်ရေ၊ ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံ အရေအတွက်)၊ ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ဥပမာ- အလင်းအားတုံ့ပြန်မှု၊ ရိုက်ကူးထားသော မျက်နှာအရေအတွက်) နှင့် သင့်မိုဘိုင်းတွင် ကျန်ရှိသော ရနိုင်သည့်နေရာလွတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ။
• သင်က ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခြား အချက်အလက်များ- ၎င်းတွင် အသုံးပြုနေသည့် အက်ပ် သို့မဟုတ် ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား ဗားရှင်း၊ ဘာသာစကား ဆက်တင်၊ IP လိပ်စာ၊ စက် အမျိုးအစား၊ IMEI၊ ဝင်ကြည့်ခဲ့သည့် ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သင်က ပံ့ပိုးပေးခဲ့သော အကြောင်းအရာကို သင်က အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပုံတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်ဝင်ကြည့်ပါက ကွတ်ကီးများနှင့် အခြား ခြေရာခံ နည်းပညာတို့သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ နောက်ထပ် အချက်အလက်အတွက် အောက်ပါ "ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပုံ" အပိုင်းကိုလည်း ကြည့်ပါ။
3. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရယူသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့က ရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုထားပါက သင်အသုံးပြုသည့် လူမှုကွန်ရက်များမှ လှုပ်ရှားမှု အပါအဝင် အများပြည်သူ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်များမှ သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင် သို့မဟုတ် သင်နှင့် သက်ဆိုင်သူမှ လက်ခံရရှိထားသည့် အခြားအချက်အလက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပေါင်းစည်းနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Facebook ၊ Twitter သို့မဟုတ် အခြားဆိုက်များတွင် OPPO အကြောင်းအရာကို သင်က လိုက်ခ်လုပ်ချိန်၊ ဖော်လိုလုပ်ချိန် သို့မဟုတ် မျှဝေချိန်ကဲ့သို့ လူမှုမီဒီယာ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ပါက သင်၏ လူမှုမီဒီယာ အကောင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သင့်ပရိုဖိုင် အချက်အလက်များ၊ ရုပ်ပုံ၊ အသုံးပြုသူ ID နှင့် လူမှုကွန်ရက်အား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေရန် သင်က ခွင့်ပြုသည့် အခြား အချက်အလက်အားလုံး အပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်မှ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
4. သင့်စက်အတွင်း စီမံဆောင်ရွက်သည့် ဒေတာ အမျိုးအစားများ
သံသယကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ဒေတာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအကြောင်း သင့်အား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အသိပေးရန် ဤအပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော ဒေတာများကိုသာ စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး သင့်စက်တွင်း၌သာ စီမံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာများသို့ အပ်လုဒ်တင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကို မှတ်သားပေးပါ။ ထို့ကြောင့် ယင်းသို့သော ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့က ဝင်သုံးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း တစ်နည်းအားဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုမည်မဟုတ်သည့်အပြင် ယင်းသို့သော အချက်အလက်များကို မည်သည့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းထံသို့မျှ ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၎င်းကို သုံးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းက ဤဒေတာ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကို သင်ကသာ ဆောင်ရွက်သည် ဖြစ်၍ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာနှင့် မသက်ဆိုင်ဟုလည်း ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းသို့သောဒေတာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးလိုပါက သို့မဟုတ် ၎င်းကို ပြင်ဆင် သို့မဟုတ် ဖျက်ပစ်လိုပါက သင့်ဒေတာများကို သင်ကိုယ်တိုင် မည်သို့ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရန်မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့က ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
• မျက်နှာနှင့် လက်ဗွေ အသိအမှတ်ပြုမှုကို သင် အသုံးပြုချိန်- ဤလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများသည် သင်၏ ကြိုတင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော မျက်နှာ သို့မဟုတ် လက်ဗွေ အချက်အလက်များသုံး၍ သင့်စက်ကို အမြန်သော့ဖွင့်နိုင်စေပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက် စဖွင့်သုံးရန် သင်၏ မျက်နှာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် လက်ဗွေ အချက်အလက်များကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ သင်က ပံ့ပိုးပေးရန် လိုသည်။ ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက် အမျိုးအစားများကို တစ်မူထူးခြားသော လျှို့ဝှက်သော့ဖိုင်စနစ်ဖြင့် ကုဒ်ပြောင်းဝှက်သွားပါမည်။
• ဓာတ်ပုံများ အချက်အလက်များ- "ဓာတ်ပုံများ" အက်ပ်သည် သင့်ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို စုစည်းစီမံရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန် စက်၏ စက်တွင်း ရုပ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို အသိအမှတ်ပြုရေး အယ်လ်ဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ သင့်တည်နေရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် အက်ပ်ကို သင်ခွင့်ပြုပါက စက်သည် သင့်ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များအတွက် လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ် အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါမည်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်နေချိန်တွင် သင့်တည်နေရာကို မှတ်တမ်းတင်လိုခြင်း မရှိပါက သင့်စက်၏ ဆက်တင်များတွင် ၎င်းကို အချိန်မရွေး သင်ပိတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံကို သင်ရှာဖွေသောအခါ စက်၏ နည်းပညာကို ရှာဖွေမှု ဝေါဟာရနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဓာတ်ပုံများနှင့် ယှဉ်တွဲမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဓာတ်ပုံများကို သင်လျင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
5. အခြား ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော ဒေတာများ
ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော ဒေတာများသည် သီးခြား လူတစ်ဦးဦးနှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ဆက်စပ်မှုမရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဆိုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က စုပေါင်းထားသော သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် အမည်မပါသော ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူများ၏ ဦးစားပေးမှုများကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးများမှုကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် သင့်ထုတ်ကုန် အတွေ့အကြုံကို အသင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်စေရန် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော ဒေတာများကို သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပါက အဆိုပါဒေတာအားလုံးကို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအဖြစ် မှတ်ယူသွားပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပုံ
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးပါမည်-
• သင့်အား OPPO ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးရန်၊ သင့်မှာယူမှုများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် သင်နှင့် OPPO ကြား သဘောတူညီချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
• သင်ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သင်၏ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သီးခြား ဆော့ဖ်ဝဲ လိုင်စင်များကို သက်ဝင်အောင် လုပ်ရန်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ အပ်ဒိတ်များအတွက် အသိပေးချက်များကို ပံ့ပိုးရန်။
• ထုတ်ကုန်ပြဿနာများကို အဖြေရှာရန်၊ ဖောက်သည်အား အခြားသောဂရုစိုက်ပေးခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန်။
• သင်၏ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေး အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အလို့ငှာ ဖောက်သည် စစ်တမ်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်။
• အသုံးပြုသူများက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်နိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ဖောက်သည် ဈေးကွက်ကို စိစစ်ရန်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ အကျိုးများမှုကို စိစစ်ရန်။
• ဖုန်းအရည်အသွေးနှင့် အက်ပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုကောင်းစေရန် ချွတ်ယွင်းမှတ်တမ်းများကို ဆန်းစစ်ရန်။
• သင့်အား စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သင့်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အကြောင်းအရာနှင့် ကြော်ငြာများကို အကြံပြုရန်နှင့် ပြသရန်။
• ကျွန်ုပ်တို့က ကျင်းပသည့် ဆုမဲပွဲများ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် အလားတူ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ခွင့်ပြုရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်။
• သင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်၊ လူမှုမီဒီယာ အကောင့်များအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် ပေးပို့လိုက်သော သင့်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်များကို အကြောင်းပြန်ရန်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေရန်၊ သင့်အိုင်ဒီကို အတည်ပြုရန်၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အတုအလိမ်၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ သို့မဟုတ် အခြား မဆီလျော်သော အသုံးပြုမှုတို့ကို တားမြစ်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
• ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်း အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်၊ အသုံးပြုသူနှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်မှု၊ လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းရည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းများအပိုင်းတွင် ထုတ်ကုန်ကို မြှင့်တင်ရန် ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင့်မြှင့်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်။
• ဥပဒေဆိုင်ရာ အရေးဆိုမှုများကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ခုခံကာကွယ်ရန်။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရာများကို လိုက်နာရန်။
2. ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာတွင် မပါဝင်သည့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသောအခါ ယင်းအကြောင်းကို သင့်အား အသိပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အသုံးပြုမှုသည် ဥပဒေကို လိုက်နာကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါမည်။
3. ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် သင့်အား သိသာစွာ ထိခိုက်စေမည့် အခြားသော သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေမည့် အယ်လ်ဂိုရီသမ်များ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပရိုဖိုင်တွဲခြင်း ပါဝင်သည့် မည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့က မချပါ။
ကွတ်ကီးနှင့် အလားတူ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူ ခြေရာခံ နည်းပညာများကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပါသည်။
1. ကွတ်ကီးများ ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။
ကွတ်ကီးများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှ လွှဲပြောင်းကာ သင့်စက်ပေါ်တွင် သိမ်းထားသော စာသားဖိုင်လေးများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများက "ကွတ်ကီးများ"၊ ပီဇယ် တဂ်နှင့် ဝဘ်ဘေကွန်များ (အတူစုပေါင်း၍ ပြောရလျှင် "ကွတ်ကီးများ") ကဲ့သို့သော အခြား နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများကို သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သတ်မှတ်မထားသော ကွတ်ကီးများသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချိတ်ဆက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးများ အသုံးပြုပုံ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်း ပါတနာများသည် သင့်စက်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ပိုမို နားလည်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်၍ မြှင့်တင်နိုင်စေရန် (ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်က မည်မျှမကြာခဏ အသုံးပြုပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် အက်ပ်တစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခဲ့သည့်နေရာတို့ကို အကဲဖြတ်ရန် ကဲ့သို့သော) အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုပြီး သင်က အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပုံကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဆန်းစစ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့က သိမ်းထားသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်း အက်ပ်များအတွင်း သင်က ပေးပို့ကောင်းပေးပို့နိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှန်သမျှနှင့် ချိတ်မထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပါတနာများသည် အပြောင်းအလဲများကို ဆန်းစစ်ရန်၊ ဝဘ်ဆိုက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ယင်းဝဘ်ဆိုက်များတလွှား အသုံးပြုသူ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခြေရာခံရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူ အခြေစိုက်ခန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုစည်းထားသည့် ဒေသတွင်း ဖွား၊ သေ၊ ရောဂါဘယဖြစ်မှု အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက်လည်း ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အမျိုးအစား
ဤအချက်အလက်များတွင် အင်တာနက် ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာများ၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP)၊ ညွှန်းဆို/ထွက်ရာ စာမျက်နှာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ကြည့်ခဲ့သော ဖိုင်များ (ဥပမာ- html စာမျက်နှာများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ စသဖြင့်) ၊ လည်ပတ်စနစ်၊ ရက်စွဲနှင့် အချိန် တံဆိပ်တုံး နှင့်/သို့မဟုတ် တို့ထိကြည့်ရှုသော ဒေတာတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
4. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ခြေရာခံခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းကြော်ငြာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် အက်ပ်များပေါ်တွင် ကြော်ငြာများပြသရန် သို့မဟုတ် အခြားဆိုက်များပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာများကိုစီမံရန် ကျွန်ုပ်တို့က ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပကုမ္ပဏီများသည် သင်ကြည့်ရှုသော လှုပ်ရှားမှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများကို အခြေခံ၍ သင့်ထံ ကြော်ငြာကို ပြသရန် ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် အလားတူ ခြေရာခံ နည်းပညာများကို သုံးနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက် အခြေပြု ကြော်ငြာခြင်းကို သင်မရယူလိုတော့ပါက အောက်ပါ စာပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကွတ်ကီးများကို သင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားမှု-အခြေပြု ကြော်ငြာခြင်းတွင် မပါဝင်ရန် သင်က ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်စက်တွင် ကြော်ငြာကို မမြင်တွေ့ရတော့ဟု မဆိုလိုဘဲ – ကြော်ငြာများကို သင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့် အံဝင်အောင်လုပ်ထားတော့မည်မဟုတ်ဟုသာ ဆိုလိုကြောင်းမှတ်သားပေးပါ။
5. ကွတ်ကီးများ ရှင်းရန်/ပိတ်ရန်
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် လည်ပတ်မှု စနစ်ပေါ် မူတည်၍ ကွတ်ကီးအားလုံးကို သင်က ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကွတ်ကီးအားလုံးကို ငြင်းဆိုရန် သင်ရွေးချယ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်အဝကို သင်က အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဤဆက်တင်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်ဘရောက်ဇာ၏ "ရွေးချယ်စရာများ" သို့မဟုတ် "ဦးစားပေးများ" တွင် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
လူကြိုက်များသော အချို့ ဘရောက်ဇာများပေါ်ရှိ ကွတ်ကီးများအား စီမံခန့်ခွဲပုံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ-
•	macOS အတွက် Safari
•	iOS အတွက် Safari
ကွတ်ကီးများအကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များနှင့် ကွတ်ကီးများကို လက်ခံ၊ ဖျက်ပစ် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုရန် သင့်ဘရောက်ဇာအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပုံ ညွှန်ကြားချက်များအတွက် www.allaboutcookies.org ကို ကြည့်ရှုပါ။
ကွတ်ကီးများကို ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် HTML5 နှင့်အလားတူ စက်တွင်း သိုလှောင်ခန်း ပစ္စည်းများ (LSO များ) ကဲ့သို့သော ခြေရာခံနည်းပညာ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ထိရောက်မှုရှိမည် မဟုတ်ပါ။
"ခြေရာမခံပါနှင့်" လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင့်ဘရောက်ဇာတွင် ဖွင့်ထားပါက သင့်ရွေးချယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့က လေးစားလိုက်နာပါမည်။
ဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက ကွတ်ကီးများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ပံ့ပိုးပေးပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အချိန်မည်မျှကြာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က သိမ်းဆည်းထားပုံ
ဥပဒေအရ ပိုကြာရှည်သော ကာလ မလိုအပ်သရွေ့ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စုဆောင်းရေး ရည်ရွယ်ချက် ပြည့်မီရန် လိုအပ်သရွေ့သာ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က သိမ်းဆည်းပါမည်။ ဤကာလထက် ကျော်လွန်၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက (ဥပမာ- အခွန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးဥပဒေ အကြောင်းရင်းများအတွက်) ဤသိုလှောင်သိမ်းဆည်းကာလ ကုန်လွန်သည့်နောက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ပစ်ပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ထိန်းသိမ်းရေး ကာလများ ကုန်ဆုံးသည့်နောက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ပစ်ပါမည် သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါမခွဲနိုင်အောင် လုပ်ပါမည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအတွက် ဆီလျော်သော ထိန်းသိမ်းကာလကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၏ ပမာဏ၊ သဘောသဘာဝနှင့် ထိခိုက်မခံမှု၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုမှုနှင့် ထုတ်ဖော်မှုတို့မှ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ထည့်စဉ်းစားပါသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အီးမေးလ်များအတွက် သင်က မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အီးမေးလ်များကို သင်က စာရင်းပေးသွင်းထားမှု ပယ်ဖျက်လိုက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ မေးလ်ပို့စာရင်းများမှ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။ သို့သော် နောက်ထပ် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို သင်လက်ခံမရရှိကြောင်း သေချာစေရန် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို တားမြစ်စာရင်းတွင် သိမ်းဆည်းပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ထုတ်ဖော်ပုံ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် OPPO သည် သင့်ထံ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်စေရန် အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းချုပ်သည့် သို့မဟုတ် ဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ("အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီများ") အခြား ကုမ္ပဏီများအပြင် OPPO နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးရနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်သော စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၎င်းတို့နှင့် မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
• အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီများ- သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို OPPO ၏ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများထံ မျှဝေပေးရနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများသည် စီမံဆောင်ရွက်မှု ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက အခြား ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်း မရှိသရွေ့ သင့်သဘောတူညီချက်ကို တောင်းဆိုပါမည်။
• ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ပါတနာများ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု အချို့အား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ သင့်ထံ ပိုကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန်နှင့် သင်၏ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါတနာများနှင့်လည်း မျှဝေရနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- လုံခြုံရေး စင်တာ အက်ပ်ကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ဗိုင်းရပ်စ်များကို စကန်ဖတ်ရန်နှင့် သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ နေရာယူထားသော သိုလှောင်ခန်း နေရာလွတ်ကို လျှော့ရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် သင့်အား အဆင့်မြင့် သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဦးတည်ချက်ပါသော ကြော်ငြာများကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ မေးလ် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ အခွန်နှင့် စာရင်းအင်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ဝဘ် လက်ခံကျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရေး ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပေါ်လည်း ကျွန်ုပ်တို့က မှီခိုရနိုင်ပါသည်။ သီးခြား ထိန်းချုပ်သူများအဖြစ် မလုပ်ဆောင်သရွေ့ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား OPPO ၏ ကိုယ်စားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ – ဆီလျော်သော ဒေတာ စီမံဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်များ – ဖြင့်သာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် ချည်နှောင်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
• စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရောင်းအဝယ်တစ်ခုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဝယ်ယူသူများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ- ကုမ္ပဏီချင်း ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အခြားကုမ္ပဏီအား ဝယ်ယူခြင်း၊ ဒေဝါလီခံ စာရင်းရှင်းဖျက်သိမ်းခြင်းတစ်ခု ဖြစ်ပွားသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံသို့ အကန့်အသတ်ဖြင့် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိသာ လွှဲပြောင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။
• ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းမှု၊ ဥပဒေ အကြောင်းရင်းများအတွက် စည်းကမ်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းသူများနှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေအရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်အား (a) ဆင့်ခေါ်စာ သို့မဟုတ် အခြား တရားစွဲဆိုမှုများ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ သို့မဟုတ် အစိုးရ အေဂျင်စီများ၏ တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်နာရန်၊ (b) ဥပဒေနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်နာရန် ထုတ်ဖော်မှုကို လိုအပ်သည်ဟု သဘောရိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည့်အခါ၊ (c) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေရေးရာ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အသုံးချရန်၊ (d) သင် သို့မဟုတ် အခြားလူများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရေ ဘေးကင်းရေးကို ကာကွယ်ရန်၊ (e) လိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် (f) ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျိုးကြောင်းညီစွာ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံသို့လည်း ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။
• အများပြည်သူ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာများတွင် ပို့စ်တင်ကြေညာထားပါက- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအချို့သည် သင့်အား အခြားလူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စေပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အပါအဝင် သင့်ပရိုဖိုင် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ဖိုရမ် သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်တွင် သင်ရေးတင်သည့် အချက်အလက်များကို သင်ဖန်တီးချိန်တွင် အခြား အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အထွေထွေ အများပြည်သူတို့က ပုံသေအားဖြင့် ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ပါမည်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အထွေထွေ ပြည်သူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ အဖွဲ့ဝင်များက ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ပါမည်။
• တစ်နည်းအားဖြင့် သဘောတူညီချက်ဖြင့်- သင့်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအချို့ထံလည်း ကျွန်ုပ်တို့က ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ လွှဲပြောင်းပုံ
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတခွင်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်းမြစ်များနှင့် ဆာဗာများကို အခြေခံပြီး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်သစ်၊ စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဒေတာ စင်တာများကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့် နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဒေသများ ပြင်ပသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် ယင်းနေရာများမှ ရယူနိုင်ပါသည်။
2. အမျိုးမျိုးသော နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဒေသများသည် မတူညီသော ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အဆင့်များကို ပေးကြကြောင်း မှတ်သားပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် အချို့သော အခြေအနေများတွင် သင်တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသတွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်မှုပေးသည့် အဆင့်အောက် နိမ့်နိုင်သည့် အဆင့်ဖြင့် ကာကွယ်မှုပေးသည့် နိုင်ငံတစ်ခုတွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါ အခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှာ လုံလောက်စွာ ကာကွယ်မှုရှိကြောင်း သေချာစေရန် အစီအမံများ ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ဥပမာ- သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို နယ်စည်းမခြားဘဲ လွှဲပြောင်းရန် သင့်ခွင့်ပြုချက် တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ပြည့်စုံလုံလောက်သော လုံခြုံရေး အစီအမံများ (ဖြစ်နိုင်ပါက လုံခြုံရေးကုဒ်ထည့်ခြင်း၊ မည်သူမည်ဝါမခွဲနိုင်အောင်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော) ချမှတ်ကာ လွှဲပြောင်းမှု မလုပ်ဆောင်မီ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လက်ခံသူများနှင့် လိုအပ်သော ဒေတာ လွှဲပြောင်းမှု/မျှဝေမှု သဘောတူညီချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပါမည်။ အထူးသဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသတစ်ခုအတွင်း ဒေတာများကို ပြင်ပသို့မပေါက်ကြားစေဘဲ ဒေသတွင်း သိမ်းဆည်းရာတွင် လိုအပ်စေသည့် ဥပဒေများကို ကျွန်ုပ်တို့က လိုက်နာမိကြောင်း သေချာအောင် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကာကွယ်ပုံ
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ စုဆောင်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် စံနှုန်းများနှင့်အညီ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နည်းပညာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်ထားပြီး မတော်တဆ သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်မညီသော ဖျက်ဆီးမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ပြောင်းလဲမှု၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ထုတ်ဖော်မှုများ သို့မဟုတ် ဝင်သုံးမှုတို့မှ တားဆီးပေးပါမည်။ သို့သော် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အစီအမံများပြုလုပ်၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကာကွယ်ထားသော်လည်း မည်သည့် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အင်တာနက် ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ကွန်ပျူတာ စနစ်များ သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက်မျှ အလုံးစုံသော လုံခြုံမှု မရှိသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပေးပါ။ အထူးသဖြင့်-
• လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းက သင်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ခြေလျော့ပါးစေရန် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား မည်သူမည်ဝါမခွဲနိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်သုံးမှု၊ သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်မှု (ဥပမာ- ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို လုံခြုံရေးကုဒ်ထည့်ရန် SSL ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်) မှ တားဆီးရန် သိုလှောင်မှုနှင့် ထုတ်လွှင့်ပေးပို့စဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အပြည့်အဝ လုံခြုံရေးကုဒ်ထည့်ခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဝင်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးမျိုးသော စနစ်များနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လက်ဆော့ခြင်းတို့အား ဟန့်တားကာကွယ်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စုဆောင်းမှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှု (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အစီအမံများ အပါအဝင်) တို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကျင့်သုံးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က ပုံမှန် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
• ယင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးနိုင်ရန် အခြေခံအားဖြင့် သိရန်လိုသည့် ယင်းသို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က OPPO ဝန်ထမ်းများနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ထမ်းများကိုသာ ခွင့်ပြုပါသည်။ ယင်းဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပမှ ဝန်ထမ်းများသည် စာချုပ်ပါ လျှို့ဝှက်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားများအတိုင်း လိုက်နာရသည်။ ယင်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ၎င်းတို့ ပျက်ကွက်ပါက ၎င်းတို့သည် ပေးလျော်ရန် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး/သို့မဟုတ် OPPO နှင့် ပတ်သက်မှုကို ရပ်စဲခံရနိုင်သည်။
• ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ အထူးအမျိုးအစားများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း ပြုလုပ်ချိန်တွင် ထုတ်လွှင့်လိုက်သည့် အကြောင်းအရာကို လုံခြုံရေးကုဒ်ထည့်ခြင်းကဲ့သို့သော ထပ်ဆောင်း လုံခြုံရေး အစီအမံများကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေး ဘိုင်အိုမက်ထရစ် အချက်အလက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ- သင့်မျက်နှာ/လက်ဗွေများပေါ်ရှိ အချက်အလက်အားလုံး အပါအဝင် ဒေတာအကြမ်းထည် မဟုတ်သည့် လူတစ်ဦးကို မည်သူမည်ဝါသိစေရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံ ပါရာမီတာများ) ပါ မရှိမဖြစ်သော အစိတ်အပိုင်းငယ်များကိုသာ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဘိုင်အိုမက်ထရစ် အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပါသည်။
• ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း ပါတနာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့က ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် လုံလောက်စွာ တာဝန်ခံထားပြီး ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စိစစ်မှုများနှင့် အကဲဖြတ်မှုများကို လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့က သေချာလုပ်ဆောင်ပါသည်။
• ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ သိရှိမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သင်တန်းပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ဆောင်ပါသည်။
• သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေး အသိအမှတ်ပြုမှုများကို မြန်ဆန်ပြည့်ဝစွာ ရရှိဖြတ်သန်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းလောကမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော စံညွှန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က သုံးပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး မတော်တဆမှု ဖြစ်ရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုမူလုပ်ဆောင်ပြီး လိုအပ်ပါက အဆိုပါ လုံခြုံရေး ဖြစ်ရပ်အကြောင်းကို သင် နှင့်/သို့မဟုတ် ပြည့်စုံသော ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အာဏာပိုင်ထံ အကြောင်းကြားပြီး ထိုမှတဆင့် ဖြစ်လာသည့် အန္တရာယ်များ လျော့ပါးစေရန် အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင့်ရပိုင်ခွင့်များ
1. သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင် အထူးသီးသန့် အခွင့်အရေးများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အထူးသဖြင့် အောက်ပါ အခွင့်အရေးများ ပါဝင်နိုင်သည်-
• အကြောင်းကြားမှု ရပိုင်ခွင့်- OPPO သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်ရှိသည့် ထင်မြင်ချက်များနှင့် အခွင့်အရေးများအကြောင်း သင့်အား မပြတ်အသိပေးရန် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာကို ဖြန့်ချိပေးနေပါသည်။
• ရယူသုံးစွဲခွင့်- သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအချို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို သင်က တိုက်ရိုက် ရှာဖွေ သို့မဟုတ် ဝင်သုံးနိုင်မည့် အင်တာဖေ့စ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွနု်ပ်တို့က ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ကိုလည်း "ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
• ပြင်ဆင်ခွင့်- သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ မတိကျ သို့မဟုတ် မပြည့်စုံဟု သင်ထင်မြင်ပါက နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခိုင်းပြီး လိုအပ်ပါက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
• သင့်စက်၏ ဆက်တင်များမှတဆင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ ပရိုဂရမ်မှ အချိန်မရွေး သင် ထွက်နိုင်ပါသည်- (အောက်ပါ "ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကို ကိုးကားပါ)။ ပရိုဂရမ်မှထွက်ရန် သင်က ရွေးချယ်လိုက်ပြီးနောက် ပရိုဂရမ်အတွက် သင့်စက်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကစုဆောင်းထားသော ဒေတာများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ပစ်ပါမည် သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါ မခွဲနိုင်အောင် လုပ်ပါမည်။
• စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ခြင်းမှ စာရင်းပယ်ဖျက်ရန်- အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ခြင်းကို ဆက်လက် မရယူလိုတော့ပါက အရောင်းမြှင့်တင်ရေး မက်ဆေ့ဂ်ျတစ်ခုစီတွင် ဖော်ပြထားသည့်နည်းလမ်းကို သုံး၍ အဆိုပါ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ခြင်းမှ သင်က အချိန်မရွေး စာရင်းပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
2. သင်တည်ရှိနေသည့် နေရာရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ထပ် ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်က ဥရောပတွင် နေထိုင်ပါက GDPR အထူးသီးသန့် ကဏ္ဍကို ကြည့်ပါ။
3. တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်လိုပါက https://www.oppo.com/mm/privacy-feedback/ မှတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာပိုင်ရှင် တောင်းဆိုမှုများ ပလက်ဖောင်း ("DSR ပလက်ဖောင်း") မှတဆင့် တင်ပြနိုင်ပါသည်။
4. လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားအတွက် သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ဆောင်ရွက်မပေးမီ သင့်အမည်သတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားပေးပါ။
5. လက်ခံရရှိသည့် ဖြေရှင်းချက်ကို သင်မကျေနပ်ပါက အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် တိုင်ကြားချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေး အာဏာပိုင်ထံသို့ သင်က လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့် ရှိနိုင်သည်။
6. သင်၏ ဆီလျော်သော တောင်းဆိုချက်ကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့က အခကြေးငွေ မကောက်ခံပါ။ သို့သော် ဆီလျော်သည့် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ကျော်လွန်သော မြောက်များစွာနှင့် အထပ်ထပ်ဖြစ်သော တောင်းဆိုချက်များအတွက် တောင်းဆိုချက်၏ သဘောသဘာဝပေါ် မူတည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကျစရိတ်အချို့ကို ကာမိမည့် ဆီလျော်သော အခကြေးငွေကို ကောက်ခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တောင်းဆိုမှုများကို တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပြီး ရှင်းလင်းသိသာစွာ မတွေ့ရသော၊ ကျိုးကြောင်းမညီစွာ ထပ်တလဲလဲဖြစ်သော သို့မဟုတ် မမျှတသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အားထုတ်မှု လိုအပ်ကြောင်း (ဥပမာ- စနစ်အသစ်များ ဖန်တီးရေးသားမှု လိုအပ်ကြောင်း) တောင်းဆိုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် အရေးပါသော ကိစ္စရပ်များနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် သင်/အခြားသူများ/ အဖွဲ့အစည်းများ၏ တရားဝင် ရပိုင်ခွင့်များနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သော တောင်းဆိုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က မတုံ့ပြန်နိုင်ပါ။
ကလေးသူငယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပုံ
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်သာ အဓိက ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကလေးငယ်တစ်ဦးသည် သူ/သူမ၏ တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက် 18 နှစ်အောက် (သို့မဟုတ် တရားဝင်လုပ်နိုင်စွမ်းအပြည့်ရရန် သက်ဆိုင်သော တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင် အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်အသက်နှင့် ညီမျှသောအသက်) ရှိသည့် မည်သူ့ကိုမဆို ကလေးတစ်ဦးအဖြစ် ဆက်ဆံပါမည်။
2. ကလေးငယ်တစ်ဦး၏ ဒေတာအား စုဆောင်းထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိပါက ဆက်စပ်ဒေတာအား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ကျွန်ုပ်တို့က ဖျက်ပစ်ပါမည်။
3. ကလေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိနိုင်သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါက "ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
1. OPPO ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပြင်ပ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆီသို့ လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ သင်သည် ပြင်ပကုမ္ပဏီများက ပံ့ပိုးပေးသော ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးမည်၊ မသုံးမည် သို့မဟုတ် လက်ခံမည်၊ လက်မခံမည်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ- ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုက်ရှိ "ကျွန်ုပ်တို့အား လိုက်ကြည့်ရန်" လုပ်ဆောင်ချက်သည် OPPO က လွှင့်တင်သော မားကက်တင်း သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အချက်အလက်များကို သင်ကြည့်နိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်အကောင့်များ (ဥပမာ- Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter စသဖြင့်) သို့ သင်ဝင်ကြည့်ရန် ခေါ်သွားပါလိမ့်မည်။
2. ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် ဒေတာကာကွယ်ရေး မူဝါဒများကို ကျွန်ုပ်တို့က မထိန်းချုပ်ပါ၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများအတွက် တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ခံမှု တစ်ခုမျှ မရှိပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် အဆိုပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာဖြင့် ခံဝန်ချုပ်ဆိုမထားပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ မတင်ပြမီ အဆိုပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေး အလေ့အကျင့်ကို ကိုးကားပါရန် သင့်အား အထူး အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပုံ
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာအား အခါအားလျော်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာတွင် အချက်အလက် ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ၏ အသိပေးချက်များကို – ဆီလျော်သည့်အတိုင်း – ဆီလျော်သည်ဟု ယူဆသည့် ပုံစံတစ်ခုဖြင့် သင့်ထံ ပေးပို့ပြီး ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာ၏ အစတွင် "နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော" ရက်စွဲကို အပ်ဒိတ်လုပ်သွားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းကြားစာ သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်မှုများ သင့်တွင် ရှိပါက သင့်တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ DSR ပလက်ဖောင်း (https://www.oppo.com/mm/privacy-feedback/ ) မှတဆင့် ပေးပို့ပေးပါ
သို့မဟုတ် – ဥရောပတွင် သင်နေထိုင်ပါက –
ပူးတွဲ- လေးစားလိုက်နာရေး အရာရှိ
သင့်တွင် မဖြေရှင်းနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့က စိတ်ကျေနပ်လောက်ဖွယ် မပြောကြားထားသည့် ဒေတာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုရှိပါက https://feedback-form.truste.com/watchdog/request မှတဆင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမေရိကန် အခြေစိုက် ပြင်ပမှ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းပေးရေး ပံ့ပိုးသူထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ (အခမဲ့)။
B. GDPR အထူးသီးသန့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ
သင်က ဥရောပတွင် နေထိုင်မှသာ အောက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များက သင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ဥပဒေရေးရာ အခြေခံများ
"သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုပုံ" အပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား အောက်ပါ ဥပဒေ အခြေခံအကြောင်းများအပေါ် အခြေခံပါသည်။
1. သဘောတူညီချက်- သင့်သဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ တည်နေရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က စုဆောင်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ ပရိုဂရမ်တွင် ပါဝင်သည့်နေရာတွင်သာမက အချို့သော သီးခြား ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသည့်နေရာတွင်လည်း သင့်ထံ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး မက်ဆေ့ဂ်ျများကို ပေးပို့ခြင်း ကဲ့သို့သော အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ရယူနိုင်ပါသည်။ သဘောတူညီချက် မပေးရန် သို့မဟုတ် အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းရန် အခွင့်အရေး သင့်တွင် ရှိပါသည်။ သင့်သဘောတူညီချက် ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် သင့်ရုပ်သိမ်းမှု မပြုမီက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုခြင်း၏ ဥပဒေနှင့်ညီမှုအပေါ် မထိခိုက်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သင်က သဘောတူညီချက် အပ်နှင်းထားပါက သဘောတူညီကြောင်း ကြေညာချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ၎င်းကို အသုံးပြုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံဆောင်ရွက်မှုအတိုင်းအတာကို သင့်သဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံထားပြီး ၎င်းကို သင်က ငြင်းဆို သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းပါက ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ကနဦး ငြင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းမှုသည် သင့်အတွက် အပျက်သဘော အကျိုးဆက်များ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
2. သင်နှင့်အတူ ဆောင်ရွက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက် ရေးထိုးပါ-
အောက်ပါ အခြေအနေများတွင် ဤဥပဒေဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းအပေါ် မှီတည်ပါသည်-
• ကျွန်ုပ်တို့က ကျင်းပသည့် ဆုမဲပွဲများ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် အလားတူ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ခွင့်ပြုရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်
• ထုတ်ကုန်ပြဿနာများကို အဖြေရှာရန်၊ ဖောက်သည် စက်ကိရိယာကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဖောက်သည်အား အခြားသောဂရုစိုက်ပေးခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန်။
3. ဥပဒေဆိုင်ရာ တာဝန်ကို လေးစားလိုက်နာမှု- ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် OPPO သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ တာဝန်များကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်၊ ဥပမာ- အခွန်ဥပဒေ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဒေတာများကို ထိန်းသိမ်းရန် OPPO က လိုအပ်သည့်အခါ။
4. တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများ- OPPO ၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စီမံဆောင်ရွက်ရန်လည်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်များတွင် အထူးသဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်-
• သင်၏ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို တိုးမြှင့်ရန် အလို့ငှာ ဖောက်သည် စစ်တမ်းများကို ဖြေဆိုရန။
• ထုတ်ကုန် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် အသုံးပြုသူဦးရေ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့် နိုင်ငံ၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြင့် ဖောက်သည် ဈေးကွက်ကို စိစစ်ရန်။
• သင်နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့် ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများဖြင့် တင်ပြထားသည့် သင့်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်များကို စာပြန်ရန။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေရန်။
• သင့်အိုင်ဒီကို အတည်ပြုရန်။
• အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန်၊ လိမ်လည်မှု၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ သို့မဟုတ် အခြား မဆီလျော်သော အသုံးပြုမှုတို့ကို တားဆီးရန်နှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
• ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းကို မြှင့်တင်ရန်၊ အသုံးပြုသူနှင့် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်မှု၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဒီဇိုင်းအပိုင်းတို့တွင် ထုတ်ကုန် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကဲ့သို့သော လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင့်မြှင့်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဖော်ဆောင်ရန်။
ယင်းအကြောင်းရင်းများပေါ် မူတည်ပြီး သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်သောအခါ သင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ရပိုင်ခွင့်ပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးစီးပွားများကို သင့်လျော်သလို အကဲဖြတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဟန်ချက်ညှိချိန်တွင်သာ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် လွှဲပြောင်းနည်းဆိုင်ရာ ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်များ
ဥရောပ၏ အပြင်ဘက်ရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသို့ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား လွှဲပြောင်းသည့်အခါမျိုးတွင် အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော ဆီလျော်သည့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများ ရှိပြီး အရေးယူလုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်ပါသည်-
1. ဥရောပ ကော်မရှင်၏ "လုံလောက်ကြောင်း" ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် နိုင်ငံအတွင်း တည်ရှိသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိသူ။
2. ဥရောပ ကော်မရှင်က အတည်ပြုထားသည့် "ပုံစံအလိုက် သဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအပိုဒ်ငယ်များ" ကို လိုက်နာပြီး ယင်းအပေါ်အခြေခံ၍ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်၊
3. သို့မဟုတ် အထက်ပါ ဆီလျော်သော ဘေးကင်းရေးအကာအကွယ်များ မရှိသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လွှဲပြောင်းမှုအတွက် သင်၏ အကြွင်းမဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းဆိုပါမည် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအတွက် လုံလောက်သော ကာကွယ်မှုအဆင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော အခြား အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ပါမည်။
ဥရောပပြင်ပတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လွှဲပြောင်းခြင်းများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးများနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ထပ် အချက်အလက်အတွက် သင့်တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ DSR ပလက်ဖောင်း (https://www.oppo.com/mm/privacy-feedback/ ) မှတဆင့် တင်ပြပေးပါ။
ကွတ်ကီးများနှင့် အခြား ခြေရာခံ နည်းပညာဆိုင်ရာ နောက်ထပ် အချက်အလက်များ
ကွတ်ကီးများနှင့် အခြား ခြေရာခံ နည်းပညာ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ရယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီး မူဝါဒကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
ကိုယ်ရေးဒေတာနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ နောက်ထပ် အချက်အလက်များ
GDPR အောက်ရှိ ဥပဒေဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအရ သင့်တွင် အောက်ပါ အခွင့်အရေးများ ရှိပါသည်-
• ရယူသုံးစွဲခွင့်- သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွနု်ပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဝင်သုံးခွင့်အား သင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
• ပြင်ဆင်ခွင့်- သင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များမှာ မတိကျ သို့မဟုတ် မပြည့်စုံဟု သင်ထင်မြင်ပါက နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
• ဖျက်ပစ်ခွင့်- ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တောင်းဆိုချက် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဥပမာ- သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဆက်လက်၍ စီမံဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေအကြောင်းရင်း ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါက – အချို့သော အခြေအနေများတွင် အလွန်အမင်း နှောင့်နှေးမှု မရှိဘဲ ဖျက်ပစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါမည်။ သင့်စက်တွင် ပါဝင်သည့် ဒေတာအားလုံးကို သင်က ဖျက်ပစ်သမျှသည် သင်နှင့် ပတ်သက်၍ OPPO က စုဆောင်းပြီး စီမံဆောင်ရွက်သည့် ဒေတာအားလုံးကို သင်က ဖျက်ပစ်လိုက်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း မှတ်သားထားပေးပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ပေးပါဟု ကျွန်ုပ်တို့အား တောင်းဆိုရန် (အပေါ်ရှိ "ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန်" အပိုင်းကို ကိုးကားပေးပါ) သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့က တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
• စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်- အချို့သော အခြေအနေများတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျမှု မရှိကြောင်း သင်က ထောက်ပြသည့်အခါ အဆိုပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၏ တိကျမှုကို အတည်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့က စီမံဆောင်ရွက်ပုံကို ကန့်သတ်ရန် OPPO သို့ သင်က တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အနာဂတ်တွင် သင်၏ ကန့်သတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုချက်ကို လေးစားလိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ယင်းသို့သော လိုအပ်သည့် ဒေတာများအား လုံလောက်စွာ သိမ်းဆည်းပါမည် သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။
• ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်- သင်၏ သီးခြား အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းရင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အချိန်မရွေး တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများနှင့်အညီ မျှခြေလုပ်ထားသော စီမံဆောင်ရွက်မှုတိုင်းကို သင်က ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ သင့်ရပိုင်ခွင့်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် လွတ်လပ်မှုများကို ပယ်ဖျက်သော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လက်ခံရမည်ဖြစ်သော အကြောင်းရင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့က ထုတ်ဖော်ပြသထားခြင်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ အရေးဆိုမှုများကို ချမှတ်၊ ကျင့်သုံး သို့မဟုတ် ခုခံကာကွယ်သည့် ကိစ္စရပ်မျိုးတွင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန် သင်က ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင် သင်နှင့် ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်မှုအား ကျွန်ုပ်တို့က ရပ်တန့်ပါမည်။ သင်သည် တိုက်ရိုက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုများကို အချိန်မရွေး မည်သည့်အကြောင်းရင်းအတွက်ဖြစ်စေ ငြင်းဆိုနိုင်သည်။
• သယ်ဆောင်ရလွယ်သော ဒေတာရပိုင်ခွင့်- စနစ်ကျပြီး အသုံးများကာ စက်က ဖတ်နိုင်သော ဖောမတ်တစ်ခုတွင်ရှိသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ကော်ပီကို သင်က ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အဆိုပါ ဒေတာများကို အခြား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ ပေးပို့ခိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည် သို့မဟုတ် အချို့သော အခြေအနေများတွင် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ သင်က ပေးပို့ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
• သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းခွင့်- သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံရန် သင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သော်လည်း နောင်တွင် စိတ်ပြောင်းသွားပါက သင့်သဘောတူညီချက်ကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သင့်သဘောတူညီချက် ရုပ်သိမ်းခြင်းသည် သင့်ရုပ်သိမ်းမှု မပြုမီက သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က အသုံးပြုခြင်း၏ ဥပဒေနှင့်ညီမှုအပေါ် မထိခိုက်ပါ။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရရှိခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုပါက အရောင်းမြှင့်တင်ရေး မက်ဆေ့ဂ်ျတစ်ခုစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းဖြင့် စာရင်းဖျက်နိုင်ပါသည်။ သင့်သဘောတူညီချက်ကို သင်က ရုပ်သိမ်းလိုက်လျှင် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
• တိုင်စာတင်ပိုင်ခွင့်- သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ကိုင်တွယ်ပုံ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သော ကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်ထံ မကျေနပ်ချက်ကို တိုင်ကြားခွင့် သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့်ခွင့် သင့်တွင်ရှိသည်။ သင့်၏ ဒေသတွင်း ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု အာဏာပိုင်ထံ ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိ၏ အဆက်အသွယ် အသေးစိတ်များ
သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာပိုင်ရှင် အခွင့်အရေးများ ပလက်ဖောင်း (https://www.oppo.com/en/privacy-feedback/ ) မှတဆင့် သင်တောင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး အရာရှိထံလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်-